Iyo T2 chip inogona zvakare kuvharira imwe MacBook Mhepo kugadzirisa | Ndinobva mac
Mune eazvino Apple mamodeli akaunzwa muna 2018, iyo MacBook Pro uye MacBook Air, isu tine iyo T2 chip. Chip iyi yakanyatsogadzirirwa mac chengetedzoKusvika padanho rekuti kumwe kugadziriswa kunoitwa pamakomputa aya kunogona kuvharwa kana Mac yakarongedzwa kudzivisa zvinogona kuitika.
Magazini yacho vava kuda yakasimbisa kuti, seye 2018 MacBook Pros, MacBook Mhepo yaizokanganiswa nekugadziriswa pamidziyo yavo, ichivhara iyo mamaboard uye iyo ID sensor. Izvo zvinoitika ndezvekuti izvi zvinoitika mune kumwe kugadziriswa, uye kwete kune vamwe.
Kana tikatarisa neApple, iyo kambani haina kupinda mune yakadzama pane yakagadziriswa Macs. Isu hatizivewo kubvira apo Apple iri kuita ichi chiyero. Izvo zviri pachena ndezvekuti kumwe kugadzirisa kunogona kuitwa chete kuApple kana vatengesi vane mvumo. Mwedzi wapfuura, iFixit yaibata ne2018 Mac Book Pro neTouch Bar, uye haana kuwana chero dambudziko. Naizvozvo, kugadzirisa kana michina isingagone kuitwa kunze kweApple uye inobvumidzwa hazvizivikanwe.
El T2 chip Iyo yakanyatsogadzirirwa kupa chengetedzo kune Mac mushandisi, kunyanya panguva yekupinda. Inovimbisa kutendeka kwesystem uye Hardware. Musiyano uripo pakati pekugadzirisa paApple kana mvumo yekutengesa uye kumanikidza kune imwe sevhisi ndeyekuti iyo Apple sevhisi inosimbisa kugadzirisa pamwe ne AST2 maitiro, inongowanikwa chete kubva kuApple.
Iyi software yekusimbisa haina kuwanikwa kuti utore kuruzhinji. Apple inoda kuona kuti kugadziriswa kwemidziyo yayo kune garandi yakakwana. Nenzira iyi, kana tichitenga rwechipiri-ruoko Mac tinogona kuva nechokwadi chekuti kugadzirisa kwaitwa munzvimbo ine mvumo. Iyo T2 Chip inodzora iyo skrini uye iyo webcam, nekudaro, kugadzirisa izvi zvinhu zvinogona kuve nemhedzisiro yakafanana neiyo mamaboard kana Kubata ID.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo T2 chip inogona zvakare kuvharidzira imwe MacBook Mhepo kugadzirisa
Iyi ndiyo gumi nembiri yekuSouth gwaro inobata uye sleeve yeMacBook Pro uye MacBook Air